Aostralia:Tsy Vahaolana Ho An’ireo ‘Boat People’ (Mpiondrana an-tsambokely) i Malezia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Aogositra 2011 12:03 GMT
Ny Malaysia deal in disarray (Fifanarahana feno fifamahofahoana an'i Malezia) an'i Amber Jamieson no mamintina ny tranga farany ho an'ny tranonkalam-baovao Crikey:
Ny fanoherana, tarihan'i QC David Manne amin'ny anaran'ireo mpitady fialokalofana 42 vao tonga (ao anatin'izany ireo tsy ampy taona enina tsy misy nanaraka), mifantoka amin'ny fanajàna ny zon'olombelona sy mametra-panontaniana ny amin'ny ho mety fiahiana homen'i Malezia ho an'ireo mpitady fialokalofana nalefan'i Aostralia..
…Enina ambin'ny folo tamin'ireo olona no tsy maintsy nihazo an'i Malizia tamin'ny fiaramanidina omaly [11 Aogositra], voalohanytamin'ny fifanakalozana mpitsoa-ponenana vaovao nifanaovan'ny governemanta tamin'i Malezia izay ahitàna 800 mpiondrana an-tsambo hatakalo mpitsoa-ponenana 4000 avy any Malezia.
Nahazo fanohanana voafetra tao amin'ny tontolon'ny bilaogy ihany ilay drafitra, kanefa voatsikira, na avy amin'ireo manakana fahatongavan'ireo antsoina hoe ‘boat people – mpiondrana an-tsambo’, na ireo mpandàla ny zon'olombelona.
Laberal izay milaza fa tofoka amin'ny fitadiavana izay mampiavaka ireo antoko roa, ny Antokon'ny Mpiasa sy ny Antoko liberaly (liberal) (ny antoko roa matanjaka indrindra) dia maneho ny fomba fijeriny amin'ny alalan'ny sariitatra mahatsikaiky ::
Sary avy amin'ny bilaogy Laberal
Tsy mety ho havia io, tsy maintsy ho havanana …indray mandeha indray
Niverina tamin'ny vahaolana misy marimaritra iraisana naroson'ny governemanta Howard teo aloha ny handefasana izay vao tonga tamin'ny sambo ho any Nauru ny sariitatr'i Ian, fepetra izay nolavin'ny governemanta Gillard ankehitriny.
Tao amin'ny Border fantasies out of control (Nofinofy Sisintany tsy voafehy), Kim ao amin'ny bilaogy iraisana Lavartus Prodeo dia mamakafaka ireo antontan'isanà fitsapan-kevitra manahiran-tsaina fa mety hanampy hanazava ny fihetsika maherin'ny governemanta:
Eo indrindra, raha marina izay voalazan'ilay fitsapan-kevitra raha marina fa nidina ny isan'ireo Aostraliana “tena sahiran-tsaina”, 43% lasa 33%, dia mbola nitoetra hatrany ho isa mahatalanjona izany. Toa nanjary tsy voafehy intsony ilay bibidia.
Amim-pitserana, mety hinevitra ny tsirairay farafaharatsny ny sasany amin'ireo ahiahy dia mety ho manodidina ny faniriana hisoroka ny tsy hitrangan'izay zava-niseho nampihoron-koditra nitranga tany akaikin'ny Nosy Krismasy tamin'ny taon-dasa ankatoky ny Noely.
Tao amin'ny Skeptic Lawyer , Legal Eagle dia tsy mankasitraka mihitsy an'ilay vahaolana farany:
Tsy afeniko fa hatrany am-boalohany aho no niahiahy momba ny “vahaolana” Maleziana . Ny fandroahana olona ho any amin'ireo nosy lavitra any na any amin'ireo firenena hafa dia tsy “vahaolana” velively. Ilàna fiovàna ifotony goavana izany. Ny tena olana, araka ny voalazako teo aloha , dia ny momba ireo tombotsoa azo amin'ny tsy rariny apetrky ny lalànantsika ho an'ireo mpitady fialokalofana – mora ho an'ny olona iray ny mahazo visa raha vao tonga eto amin'ny tanintsika izy ireo noho ny hoe tsy eto amin'ny tanintsika izy ireo, na dia tsy nisy fiovàna eny fa na dia bitika monja aza ny zavatra nitranga mahazo ireo mpitady fialokalofana.
Tao amin'ny lahatsoratra Christians cannot accept Malaysia solution (Tsy afaka ny hanaiky ny vahaolana Malaizia ireo Kristiana), Rob Benson avy amin'ny iDigress, ‘Musings of an antipodean contrarian’ Fomba fisainan'ny olona iray mandà ny antipode’, dia mijery ilay raharaha amin'ny fomba fijery ara-môraly:
Ilay lazaina ho “vahaolana Malezia” avy amin'ny governemanta federaly dia sahala amin'ny fanapahan-kevitra hentitra, kanefa tsy dia mendrika loatra amin'ny lafin'ny zon'olombelona, ary mifanohitra amin'ny fomba fijery Kristiana voalanjalanja momban'ny fitsarana sy ny famindram-po.
Io politika io dia ho hafatra ho an'ireo mpangataka fialokalofana amin'ny hoavy sy ireo mpanondrana olona antsokosoko, kanefa ny fanaovana izany zavatra izany no ratsy indrindra.
Ny Aussie Views New an'i Peter no voalohany misaina ireo ankizy, indrindra fa ireo izay tsy niaraka tamin'ny olon-dehibe:.
Tsy haiko hoe toy ny ahoana ny tebiteby sy ny fijalian'ny reny mety handefa an-janany an-tsambo kely ho any amin'ny tany hafa. Kanefa kosa fantatro hoe hatraiza ny hamafin'ny fepetra takiana raha handefa ankizy tsy misy mpanaraka anaty fiaramanidina ho any Malezia. Mbola hohita eo ny momban'i Aostralia raha handao ny andraikiny iraisam-pirenena ihany sy ireo fitakiana fitovian-jo ka hemrina ireo ankizy tsy misy mpanaraka izay vao tonga tao Malezia.
Leo i John George tao amin'ny Had Enough. Tsy manohana izy na ny governemanta na ireo olona antsoiny hoe “tsy ara-dalàna”.
Noho izany dia toy ny nandamoaka ilay Vahaolana Maleziana ; firodànana Gillard iray hafa koa. Hanoka-baravarana ho an'ireo lazaina fa mpitsoa-ponenana miisa 4000 isika ankehitriny, nefa mbola tsy fantatra akory na halefa any Malezia ireo tsy ara-dalàna eto amintsika na tsia. Ny tiako ho lazaina dia hoe nitanila hatrany am-boalohany ilay fifanarahana ka miharatsy kokoa izany amin'izao fotoana. Midika ve izany fa tena vendrana mihitsy ireto olona ireto sa ahoana ?
Lalina izany, tena tsy takatro mihitsy hoe nahoana ry Gillard sy ny tariny ihany no mafy loha ka nanome lamosina ny Vahaolana Naru, satria fotsiny mety misy hihevitra azy ireo ho manohana ny hevitr'i Howard.
Julian Burnside, mpisolovava fanta-daza ary mpiaro ny zon'olombelona dia niangavy ny Aostraliana mba hieritreritra ny toetoetra maha-izy azy ny firenenay:
Ka indreto isika: Aostralia-n’ ny taona 2011. Mba hahametimety ny fiainana dia nadinointsika ny fototra niaviantsika, ny harentsika, ny fahajambantsika ary ny fitiavan-tenantsika. Eo amin'ny toeran'ny fitadidiana dia nanangana angono mikasika firenena iray be malàla-tànana, firenena mahay mandray, tanin'ireo vahiny vao tonga izay itovian'ny rehetra zo; angano iray izay ny hambo tsy misy dikany no nameno ny toerana banga tokony ho an'ny fahamarinana nadinoina..
Na angamba tsy angano akory aza. Angamba tena marina ny endriky ny firenentsika, kanefa nohadinoin'ireo mpanao pôlitikantsika ny aminy. Raha toa ka omentsika lanja hoe iza isika, dia tokony ampahatsiahivintsika azy ireo. Satria ny tena toetoetra amin'ny maha fanjakana antsika dia isan'andro no amolavolan'ireo mpanao politikantsika azy avy amin'ny ataony isoloana tena antsika. Lazao an'i Canberra fa tsara noho izany isika, raha toa ka adinontsika..
Na inona na inona vokatry ny dingana araka ny lalàna, ny olan'ny mpitady fialokalofana dia mbola hivaha mihitsy, indrindra raha tsy misy marimaritra iraisana eo amin'ireo antoko pôlitika mba hiatrehana izany zavatra izany.
Ny hajian-tsary nampiasaina dia avy amin'ilay mpampiasa Flickr, Takver (CC BY-NC 2.0).
10 ora izayFilipina